Amerika, Nitia Anao Aho · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Novambra 2016 9:04 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, русский, Français, Español, Deutsch, srpski, English
“An-tapitrisany izy ireo manerana izao tontolo izao no mankamamy ilay idealy amerikana fa na inona finoana sy fiavianao, dia hampandroso anao i Amerika.” Ilay Mulberry Street maro foko sy maro kolontsaina ao New York, manodidina ny taona 1900. SARIPIKA: Library of Congress (via Wikimedia Commons) azon'ny rehetra ampiasaina.
Dar es Salaam, Tanzania — Roa taona lasa izay no nandaozako ny morontsiraka atsinanan'i Afrika sy niantsonako tao Phoenix, Arizona, hisitraka ny vatsy sy fianarana famoaham-baovao ao amin'ny sekolin'ny famoaham-baovao Walter Cronkite anatin'ny Oniversitem-panjakana Arizona. Na dia efa nitsidika an'i Etazonia indray mandeha isan-taona aza aho hatramin'ny taona 2012, dia sambany aho no honina ao. Ary fotoana nampientanentana ahy tokoa izany tamin'izany fotoana izany.
Niraikitra lalina ny fitiavako an'i Amerika. Tahaka ny maro indray mihira amiko, nihalehibe tao anatin'ny fijerena sarimihetsika amerikana, nandihy tamin'ny hirany, namaky ny mpanoratra ary nilalao ny fanatanjahantenany aho. Ny marina, nanana fiantraikany lalina tamiko io firenena io ka lasa mpamoaka vaovao aho, tamin'ny ankapobeny, noho ny sarimihetsika amerikana iray. Fony aho 14 taona, nahita an'ilay mahafinaritra Denzel Washington nilalao an'i Gray Grantham tamin'ny “The Pelican Brief” aho. Tantaran'ilay mpanangom-baovao tsy manan-tahotra, izay nampian'ilay mpianatra lalàna Julia Roberts, namoaka ny tsikombakomba ratsin'ilay ratremaben'ny solika miaraka amin'ny mpitsara namany sasantsasany miezaka ny mamely ny Fitsarana Tampon'i Etazonia hiarovany ny tombontsoany. Raiki-pitia tanteraka aho tamin'izany. Raha haka tahaka an'i Method Man, “Toy ny nahita aho, io ny marina, adinoy ny zavatra hafa rehetra, izany no tiako atao amin'ny fiainako.”
Ary vao maika nanamafy ny fankamamiako an'i Etazonia ny taona niainako tao Arizona. Te-hiteny amin'ny olona aho, “America ihany no firenena tokana nahitako ny fanekena ny fahatongavan'ny fimaroana handraisana ny maha-ianao anao ary vetivety ny andraisan'olona anao ho ao anatin'ny fiaraha-moniny sariaka.” Efa nanoratra taratasim-pitiavana, teny maro hanambarana ny fahalehibiazany.
Dia indro fa tonga i Donald Trump.
Efa maro ny voasoratra momba ny fankahalana vahiny sy fanavakavaham-bolonkoditra avy amin'ity lehilahy ity. Ho ahy, ny zavatra mahavariana ahy indrindra tamin'ny fisongadinany dia ny fomba nandraisany mora ny fomba fijeriny mitongilana. Tsy manao teny ambadika, izy hiviliana amin'ny fehezanteny iray fa tena mahitsy ny teniny araka ny nolazain'ny mpiara-miasa taloha iray izay, ary aharihariny ny fanivaivany ny Miozolomana, ny Latinos, ny Afrikana-Amerikana ary ny vehivavy.
Ary dia mamaly amin'ny fironana fifidianana azy ny olona. Ny vato 13 tapitrisa azony tamin'ny fifidianana savaranonando tao amin'ny Antoko Repoblikana no isa ambony indrindra azon'ny kandidà iray ho solontenan'ny antoko teo amin'ny tantara.
Talanjona aho. Fa iza ireo Amerikana manohana ity fanatika ity, hoy aho tany anatiko tany?
Tsy afaka ny mampitovy an'i Trump sy ireo nifidy azy amin'ireo olona mifanerasera amiko eto Phoenix aho. Olona tahaka ny profesora mpampianatra ahy, ny Dr. Bill Silcock, talen'ny fandaharana momba ny famoaham-baovao izay mampiatrano ireo olona avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao, izay tena manam-panahy, ary nahafahako niresaka momba ny Islam sy ny tantarany.
Ny fijerin'i Trump an'izao tontolo izao ihany koa dia tsy mitovy mihitsy amin’ny fijerin'i Peter Bhatia, izay tonia ao amin'ny Cincinnati Inquirer amin'izao fotoana izao. Samy mankamamy basket-ball fatratra izaho sy i Bhatia ary efa ora maro dia maro no niarahanay nijery ny ekipa Phoenix Suns nilalao.
Mifangarika tanteraka amin'ny fahalalahan-tanana hitako amin'i Sandy Bahr— nanokana ny fotoanany manontolo hiaro ny tontolo iainana — sy ny vadiny Dave, fianakaviana nandray ahy ary nikarakara ahy ho toy ny zananilahy ny tsy fahazakan'i Trump ny hafa. Ary tsy misy idirany ihany koa amin'ny fikarakaran'i Kristi Kappes, izay naharitra tamim-pahatsaram-panahy, nanampy ahy sy ireo mpiara-mianatra amiko hizatra ny fahasarotam-pizotram-piainana eto Amerika. Ary mbola misy koa an-dry Andrew Leckey, Kathryn McManus ary ry Retha Hill, izay mpitari-dalana ahy, ka nahafahako nandroso tamin'ny lalampiainan'asako ny torohevitra mahasoa avy amin'izy ireo.
Ireo olona ireo sy ny soatoavina nananany no nanamafy orina ny fitiavako an'i Amerika.
Koa na dia niady mafy hahazo ny fanendren'ny Repoblikana aza i Trump, dia ireo olona ireo no fijery mifanohitra amin'ny vina tery saina ijereny an'i Amerika.
Tsikaritra anefa fa olo-maningana ireo fa tsy ny ankapoben'olona.
Tamin'ny 8 Novambra 2016, Amerikana mihoatra ny 50 tapitrisa, fotsy hoditra ny ankamaroany, no nanolotra ny prezidansa ho an'ny lehilahy iray, na dia—na, noho ny—tsy fitiavany izay tsy fotsy hoditra.
Nahaketraka ny mieritreritra hoe nifidy an'i Trump ny olona satria mitovy hevitra aminy sy ny fahateren-tsainy na nifidy azy tsy niraharaha ireo zavatra ireo.
Angamba tsy rariny ihany ny miantso ny mpifidy an'i Trump ho mpanavakava-bolonkoditra. Namako iray no niteny fa ny fametahana olona ho izany no mahatonga ny vokatra ho tahaka izao. Tsy mety izany ary maharikoriko, sy mampiseho ny tsy fahatakarana ny fomba fihevitra sy fihetsiky ny olona tsy mitovy amin'ny antsika. Milaza amin'ny olona izao fa tsy [n]ankatoavina ny ahiahy sy ny tahotr'izy ireo amin'ny fiovana mihazakazaka mitranga amin'ny fiarahamonin'izy ireo. Midika ve izany fa ireo mpifidy ireo, izay fotsy hoditra ny ankamaroany, dia nisafidy an'i Trump ho fomba handraisana indray ny fifehezana ilay firenena izay heverin'izy ireo fa tavela any aoriana? Amin'ny teny hafa, izay ve ny fomba fitenin'izy ireo, misy dikany ihany izahay ato amin'ity Amerika vaovao ity?
Angamba. Saingy tsy misy ny afa-miala, araka ny nitenenan'i David Remnick azy, ny halozàn'ny fanapahan-kevitra hanandratra olona iray feno fanivaivana ireo olona tsy mitovy aminy.
Iny “kapoka karavasy fotsy” iny, araka ny nanoratan'i ngeza Van Jones azy, no namono indrindra izay zavatra mahatonga ny fahangezàn'i Amerika indray.
An-tapitrisany izy ireo manerana izao tontolo izao no mankamamy ilay idealy amerikana— na anganongano izany na tena zavamisy, dia hevitra matanjaka dia matanjaka — fa na inona finoana sy fiavianao, dia hampandroso anao hiditra ao aminy i Amerika. Na izany na tsy izany dia ity no firenena indroa nifidy ho filoha, ny zankalahin'ny Kenyana iray, izay azo tanterahana eto ihany fa tsy any an-kafa eto amin'izao tontolo izao ny tantarany araka ny filazany. Tamin'ny nifidianana an'i Donald Trump, anefa, dia ampahany maro amin'i Amerika fotsy hoditra no nadao izany fampanantenana izany ary miteny amin'izao tontolo izao hoe mbay tany ny fahasamihafana, ny fahalalahana ara-pivavahana ary ny petrakevitra rehetra momba ny fimaroana. Ao anatin'i Amerika taorian'ny 11/9, miverina eo amin'ny fitondrana indray ny fotsy hoditra, hoy ry zareo.
Ao anatin'izany rehetra izany, nieritreritra an'i Khizr Khan, rain'ilay miaramila maty tany Iràka aho, sy izay nolazainy raha nanantomotra ny fifidianana. Tamin'ny fivoriana iray ho fanohanana an'i Hillary Clinton, nanao andiam-panontaniana sy valiny tamin'ny vahoaka nanatrika teo Atoa Khan.
“Donald Trump, manana anjara toerana ao amin'ny Amerika-anao ve ny zanako Kapiteny Humayun Khan?” Hoy ny fanontanian'Atoa Khan.
Nanetriketrika ny famalian'ny mpanatrika hoe, “Tsia!”
“Manan-toerana ao amin'ny Amerika-anao ve ny Miozolomana?”
“Tsia!” hoy ny fanohizan'ny mpanatrika.
“Manan-toerana ao amin'ny Amerika-anao ve ny Latinô?”
“Tsia!” hoy ny valiny.
“Manan-toerana ao amin'ny Amerika-anao ve ny Afrikana-Amerikana?”
“Tsia!” hoy ny feo mamaly mihamafy hatrany .
“Manan-toerana ao amin'ny Amerika-anao ve ny rehetra tsy mitovy aminao?”
Nahazo valinteny mireondreona sy iraisana izy manao hoe, “Tsia!”
Namehy ny teny Atoa Khan tamin'ny filazana hoe, “Soa ihany, Atoa Trump, tsy io ny Amerika-anao.” 36 ora taty aoriana, voatosika Atoa Khan. Nandefa hafatra ho azy ilay firenena izay nanomezan'ny zanany lahy ny ainy. Firenen'i Trump ity ankehitriny, hoy ny hafatra. Ary mety tsy hanana toerana eto amin'ity Amerika vaovao ity intsony ny olona tahaka an'Atoa Khan.
Ary mahavaky ny foko izany.
Mpianatra nahazo vatsim-pianarana tamin'ny Knight International Journalism an'i ICFJ i Omar Mohammed sy avy amin'ny Code for Africa Lead ao Tanzania, fandraisana an-tanana kaontinantaly iray misahana ny tekonolojia sy famoaham-baovaon-dahatahiry. Monina ao Dar es Salaam, renivohitra ara-barotr'i Tanzania izy. Zohio izy ao amin'ny Twitter @shurufu.
Etazonia 3 herinandro izay